शीर्षकमा बाइबल पदहरू: भाइरस / रोगहरू -> भगवान
भगवान: [भाइरस / रोगहरू]
हे मेरा प्रजा, आ-आफ्‍ना घर जाओ र घरमा पसी ढोका बन्‍द गर। परमेश्‍वरको क्रोध नमरेसम्‍म केही समयको लागि तिमीहरू लुकेर बस।
 सर्वशक्तिमान् परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ कि विपत्ति एउटा जातिदेखि अर्को जाति गर्दै बढिआउनेछ र पृथ्‍वीको पल्‍लो भागमा एउटा ठूलो आँधी-बेहरी तयार हुँदै छ। त्‍यस दिन परमप्रभुले मार्नुभएकाहरूको लाश पृथ्‍वीको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्‍म छरिएर रहनेछ। कसैले तिनीहरूका निम्‍ति विलाप गर्नेछैन, कसैले तिनीहरूका लाश जम्‍मा गरी गाड्‍नेछैन। ती लाशहरू मलको थुप्रोझैँ जमिनमा लडिरहनेछन्।
२ इतिहास ७:१३-१४
 जहिले-जहिले म वर्षा बन्‍द गर्छु वा अन्‍नका बाली नाश गर्न सलहहरू पठाउँछु वा मेरा प्रजामाथि महामारी पठाउँछु, त्‍यस बेला मेरा प्रजाले मलाई प्रार्थना गरे र पश्‍चात्ताप गरेर आफूले गरेका दुष्‍कर्महरू त्‍यागे भने म स्‍वर्गमा तिनीहरूको बिन्‍ती सुन्‍नेछु, पाप क्षमा गर्नेछु र फेरि तिनीहरूको देशको फलिफाप गराउनेछु।
 त्‍यसपछि थुमाले दोस्रो मोहर खोल्‍नुभयो र मैले दोस्रो जीवित प्राणीले “आऊ!” भनेको सुनें। अर्को एउटा रातो घोडा निस्‍क्‍यो र मानिसहरूले एक-अर्कालाई मारामार गरून् भनेर त्‍यस रातो घोडामाथि चढ्‍नेलाई लडाइँ ल्‍याउने अधिकार दिइएको थियो। उसलाई एउटा ठूलो तरवार दिइयो। त्‍यसपछि थुमाले तेस्रो मोहर खोल्‍नुभयो र तेस्रो जीवित प्राणीले “आऊ!” भनेको मैले सुनें। कालो घोडा निस्‍क्‍यो। यसमाथि चढ्‍ने मानिसको हातमा एउटा तराजु थियो। “एक दिनको ज्‍यालाले एक किलो गहुँ वा तीन किलो जौ किन्‍न सकिन्‍छ तर भद्राक्ष र अङ्‌गुरका बोटलाई खति नगर।” अनि थुमाले चौथो मोहर खोल्‍नुभयो र चौथो जीवित प्राणीले “आऊ!” भनेको मैले सुनें। मैले हेरें! हल्‍का पहेंलो रङ्गको एउटा घोडा देखा पर्‍यो। यसमाथि चढ्‍नेको नाउँ “मृत्‍यु” थियो र पाताल पनि यसको पछि लागेको थियो। तिनीहरूलाई लडाइँ, अनिकाल, महामारी र जङ्गली जन्‍तुहरूद्वारा एक चौथाइ भाग नाश गर्ने अधिकार दिइएको थियो।
१ शमूएल ५:६
परमप्रभुले अश्‍दोदका मानिसहरूलाई कडा दण्‍ड दिनुभयो र तिनीहरू डराए। उहाँले तिनीहरूलाई र छेउ-छाउका इलाकामा भएका मानिसहरूलाई गिर्खा ल्‍याइदिएर दण्‍ड दिनुभयो।
२ कोरिन्थी ४:७
यस्‍तो बहुमूल्य धन हामीजस्‍तो माटाको भाँडामा राखिएको कारणचाहिँ सबै शक्ति सर्वोच्‍च परमेश्‍वरकै हातमा छ भनी देखाउन हो, हामीसँग कुनै शक्ति छैन।
“मबाहेक अरू कुनै देवता-देवीलाई तिमीहरूले नपुज्‍नू।
प्रभुको अघि नम्र बन र उहाँले तिमीहरूलाई उचाल्‍नुहुनेछ।
“कसैले पनि दुई मालिकको सेवा गर्न सक्‍दैन। नत्रता उसले एउटालाई हेला र अर्कोलाई चाहिँ माया गर्नेछ कि त एउटाले भनेको मान्‍छ र अर्कोको वास्‍तै गर्दैन। त्‍यसै गरी तिमीहरूले पनि परमेश्‍वर र धन दुवैको सेवा गर्न सक्‍दैनौ।
केही कुरामा पनि फिक्री नगर। तर तिमीहरूलाई खाँचो परेको कुरा प्रार्थनामा परमेश्‍वरलाई भन अनि धन्‍यवाद दिंदै बिन्‍ती चढाओ।
 हे मेरो प्राण, परमप्रभुको प्रशंसा गर्‌ र उहाँ कस्‍तो दयालु हुनुहुन्‍छ, नबिर्सी। उहाँले मेरा सबै पाप क्षमा गर्नुहुन्‍छ र उहाँले मेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्‍छ।
 अचानक परमप्रभुले बतास पठाउनुभयो। त्‍यस बतासले समुद्रबाट बट्टाई चराहरू उडाइल्‍यायो। बट्टाई चराहरू भूइँबाट एक गज जति अग्‍लोमा उडेर आए र छाउनीका चारैपट्टि बसे। एक दिनको टाढा चारैतिर बाटोसम्‍म चराहरू बसेका थिए। यसरी त्‍यो दिन, रात र भोलिपल्‍ट दिनभरि मानिसहरूले बट्टाई चराहरू समात्‍ने काम गरिरहे। कसैले पनि हजार किलोग्रामभन्दा कम बटुलेन। ती छाउनीका चारैपट्टि तिनीहरूले फिँजाएर सुकाए। तिनीहरूले सबै मासु खाइसक्‍दानसक्‍दै परमप्रभु ती मानिसहरूसित रिसाउनुभयो र तिनीहरूका माझमा एउटा महामारी फैलाउनुभयो।
 तब परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्‍नुभयो, “आगोको भट्टीबाट एकदुई मुट्ठी खरानी लेओ। मोशाले ती खरानी राजाको अघि हावामा छरोस्। खरानी मसिनो धुलाझैँ भएर सारा मिश्रदेशभरि फैलिनेछ र सबै मानिस र पशुहरूका शरीरमा पिलो निस्‍कनेछ। ती पिलाहरू फुटेर घाउखटिरा बन्‍नेछन्।” यसरी ती दुई खरानी लिएर राजाकहाँ गए। मोशाले खरानी हावामा फ्‍याँकिदिए र त्यो खरानीले सबै मानिस र पशुहरूका शरीरमा पिलो उब्‍जाइदियो। पिलो फुटेर घाउखटिरा भयो। अरू सबै मिश्रीहरूको शरीरमा जस्‍तै जादूगरहरूका शरीरमा पनि पिलो निस्‍क्यो र तिनीहरू मोशाको अघि देखा पर्न पनि सकेनन्।
 मेरा भाइहरू, हरप्रकारका जाँच आइपर्दा आनन्‍दित होओ। तिमीहरू जान्‍दछौ, जब तिमीहरूको विश्‍वासको जाँच हुन्‍छ, तिमीहरूको सहने शक्ति बढ्छ। तर कुनै कुरामा पनि नचुकी परिपक्‍व र सिद्ध हुन ती जाँचहरू सहँदै स्‍थिर भएर बस्‍न सिक्‍ने गर। तिमीहरूमा कसै-कसैलाई बुद्धिको खाँचो छ भने परमेश्‍वरसँग माग र बुद्धि पाउनेछौ किनभने परमेश्‍वरले नअन्‍कनाई सबैलाई प्रशस्‍त गरिदिनुहुनेछ। तर माग्‍दा शङ्का नगरी विश्‍वास राखेर माग्‍नुपर्छ। शङ्का गर्ने मानिस त हावाको भरमा चल्‍ने समुद्रको छालजस्‍तै हो।
 ती चार स्‍वर्गदूत फुकाइए, सारा संसारका मानिस जातिको तेस्रो भागलाई नाश पार्नलाई यसै वर्षको यसै महिनाको यसै दिनको यही बेलाको लागि उनीहरू तयार पारिएका थिए। त्‍यहाँ बीस करोड घोडचढी फौज छन् भन्‍ने मैले सुनें। अनि मेरो यो दर्शनमा मैले ती घोडा र तीमाथि चढ्‍नेहरू देखें। तिनीहरूका छातीमा लगाएका कवचहरूचाहिँ आगोजस्‍तो रातो, नीलमजस्‍तो नीलो, गन्‍धकजस्‍तो पहेंलो देखें। घोडाहरूका टाउका सिंहका टाउका जस्‍ता थिए र तिनीहरूको मुखबाट आगो धूवाँ, र गन्‍धक निस्‍कन्‍थ्‍यो। दुनियाँभरिका मानिसहरूलाई तेस्रो भागको तीन महामारीले मार्‍यो। त्यो महामारीचाहिँ घोडाको मुखबाट निस्‍कने आगो, धुवाँ र गन्‍धक थिए किनभने ती घोडाका मुख र पुच्‍छरमा पनि मार्ने शक्ति थियो। तिनीहरूका पुच्‍छर विषालु साँपका टाउकाजस्‍ता थिए र मानिसहरूलाई पिरोल्‍न ती चलाउँथे।
 “त्‍यो दिन र बेला कहिले आइपुग्‍ने हो, त्‍यो ठीकसँग कसैलाई पनि थाहा छैन। स्‍वर्गदूतहरू र म पुत्रलाई समेत थाहा छैन। त्‍यो कुराचाहिँ परमेश्‍वर पितालाई मात्र थाहा छ। त्‍यसैले चनाखो भएर जागै बस किनभने त्‍यो समय कहिले आउने हो, तिमीहरूलाई थाहा हुँदैन। “त्‍यो त नोकरहरूलाई घर जिम्‍मा लगाएर डुल्‍न जाने मालिकको कुराजस्‍तो छ। मालिकले आफ्‍ना नोकरहरूलाई आ-आफ्‍नो काम गरिराख्‍नू भनेर कामको जिम्‍मा लगाइदिन्‍छ अनि पालेलाई पनि ‘राम्रो देखरेख गर्नू!’ भनेर अह्राइराख्‍छ। त्‍यसकारण चनाखो भएर बस किनभने मालिक कुन बेला फर्की आउने हो, तिमीहरूलाई थाहा हुँदैन। ऊ त साँझमा, आधारातमा, भाले बास्‍ने बेलामा या बिहानीपख, कुनै पनि बेला आइपुग्‍न सक्‍छ अनि अचानक आइपुग्‍दा उसले तिमीहरूलाई सुतिरहेको नभेट्टाओस्! तिमीहरूलाई भनेजस्‍तै मैले सबैलाई नै भनेको हुँ, चनाखो भएर बस!”
 तिनीहरूले उहाँलाई भन्‍न सक्‍छन्, “मलाई बचाउने र रक्षा गर्ने तपाईं हुनुहुन्‍छ, तपाईं मेरो परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ, म तपाईंमा भरोसा राख्‍दछु।” उहाँले तिमीलाई सबै लुकेका खतराहरूदेखि र सबै प्राणघातक रोगहरूदेखि कुशल राख्‍नुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्‍ना पखेटाले ढाक्‍नुहुनेछ, तिमी उहाँको रेखदेखमा कुशलसित रहनेछौ, उहाँको विश्‍वासयोग्‍यताले तिमीलाई रक्षा गरेर बचाउनेछ। दिउँसो अचानक आइलाग्‍ने आक्रमणदेखि वा रातमा हुने कुनै खतरादेखि तिमीले डर मान्‍नुपर्नेछैन वा अन्‍धकारमा आइलाग्‍ने आपत्-विपद् अथवा दिउँसै प्राण लिने दुष्‍ट कुराहरूदेखि डराउनुपर्नेछैन। तिम्रो छेउमा हजार जना लोट्लान्, तिम्रा चारैपट्टि दश हजार, तर तिमीलाई केही चोट लाग्‍नेछैन। दुष्‍टहरूले कसरी सजायँ पाउँछन्, तिमीले देख्‍नेछौ। परमप्रभुलाई आफ्‍ना त्राणकर्ता र सर्वोच्‍च प्रभुलाई आफ्‍ना रक्षक तिमीले बनाएका छौ, यसर्थ तिमीमाथि केही विपद् आइपर्नेछैन र तिम्रो घर छेउछाउ कुनै हुलदङ्गा आउनेछैन। तिमी जहाँ गए पनि रक्षा गर्नलाई परमेश्‍वरले आफ्‍ना दूतहरूलाई तिम्रो जिम्‍मा दिनुहुनेछ। ढुङ्गामा तिम्रा खुट्टालाई चोट नलागोस् भनेर तिनीहरूले आफ्‍ना हातले तिमीलाई उचालिराख्‍नेछन्। तिमीले सिंहहरू र सर्पहरू, डरलाग्‍दा सिंहहरू र विषालु सर्पहरू पैतालाले कुल्‍चनेछौ। “जसले मलाई प्रेम गर्छन्, तिनीहरूलाई म बचाउनेछु र जसले मलाई परमप्रभु भनी स्‍वीकार गर्छन्, तिनीहरूलाई म रक्षा गर्नेछु।
 एकपल्‍ट चेलाहरूले, “राम्रा-राम्रा ढुङ्गाहरूले बनाइएको र चढाइएका भेटीहरूद्वारा सिङ्गारिएको यो मन्‍दिर कति सुन्‍दर छ!” भन्‍दै कुरा गरिरहेका थिए। येशूले भन्‍नुभयो, “यस्‍तो समय आउनेछ, जुन समयमा अहिले यहाँ देखिएका घरहरूका एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि बाँकी रहनेछैन, सबै भत्‍काइनेछ!” तिनीहरूले भने, “गुरुज्‍यू, यो कहिले हुनेछ? अनि यस्‍तो हुन लाग्‍यो भनी हामीले कसरी थाहा पाउने?” येशूले भन्‍नुभयो, “होशियार रहो, तिमीहरूलाई कसैले पनि छकाउन नपाओस् किनभने धेरै मानिसहरू मेरो नाउँमा ‘ख्रीष्‍ट मै हुँ’ भन्‍दै आउनेछन् अनि ‘समय नजिकै छ’ भन्‍नेछन् तर तिनीहरूको पछि नलाग। घमासान लडाइँ र झगडा भएको कुरा सुनेर नआत्तिनू, अन्‍त हुनुभन्दा पहिले ती सबै कुराहरू हुन आउनु नै पर्छ। तर त्‍यति नै खेर त संसारको अन्‍त हुँदैन!” येशूले फेरि भन्‍नुभयो, “जाति-जातिको बीचमा लडाइँ चल्‍नेछ। एउटा राज्‍यले अर्को राज्‍यमाथि हमला गर्नेछ। ठूला-ठूला भूइँचाला जानेछन्, जताततै अनिकालपर्नेछ, महामारी चल्‍नेछ। आकाशमा डरलाग्‍दा कुराहरू हुनेछन् र ठूला-ठूला चिन्‍हहरू देखिनेछन्। “यी सबै कुरा हुनुभन्दा अघि मानिसहरूले तिमीहरूलाई मेरो नाउँको कारणले पक्रनेछन्, सताउनेछन्, सभाघरमा लगेर मुद्दा चलाउनेछन् र झ्‍यालखानमा हाल्‍नेछन्। अझै तिनीहरूले तिमीहरूलाई राजा र बडा-हाकिमका अगाडि उभ्‍याउनेछन्। त्‍यस बेला तिमीहरूलाई मेरो बारेमा साक्षी दिने मौका मिल्‍नेछ। तर आफ्‍नो बचाउको लागि के भन्‍ने हो भनेर पटक्‍कै चिन्‍ता नगर किनभने म तिमीहरूलाई यस्‍तो वचन र बुद्धि दिनेछु कि तिमीहरूले भनेको कुराहरूमा उत्तर दिन तिमीहरूका विरोधीहरूको मुखमा बुजो लाग्‍नेछ। आफ्‍नै आमा-बुबा, दाजुभाइ, आफन्‍त र साथीहरूले समेत तिमीहरूलाई पक्राइदिनेछन्। तिमीहरूमध्‍ये कतिलाई त तिनीहरूले मार्नेछन्। मेरो कारणले सबैले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्। तर एउटै केश पनि तिमीहरूको टाउकोबाट झर्नेछैन। डटेर बस र तिमीहरूले जीवन पाउनेछौ। ‘यरूशलेम सहरलाई फौजले घेरा हालेको देखेपछि अब सहरको नाश हुने बेला आइपुगेछ’ भन्‍ने कुरा तिमीहरूले बुझ। त्‍यस बेला यहूदिया क्षेत्रमा हुनेहरू पहाडतिर भागून्, सहरभित्र हुनेहरूले सहर छोडून् र गाउँतिर हुनेहरू सहरमा नपसून् किनभने ती सजायका दिनहरू हुन् अनि धर्मशास्‍त्रमा लेखिएका सबै कुरा पूरा हुने नै छन्। त्‍यस बेला कोखमा या काखमा बालक हुने आमाहरूलाई झन् अप्‍ठ्यारोपर्नेछ। देशभरि डरलाग्‍दो दु:ख आइपर्नेछ। परमेश्‍वरको दण्‍ड यस जातिका मानिसहरूमाथि खनिनेछ। शत्रुहरूले मानिसहरूलाई कि त तरवारले टुक्र्याउनेछन् कि त कैद गरेर देश-देशमा लैजानेछन्। अरू जातिका मानिसहरूको दिन पूरा नहुञ्‍जेल तिनीहरूले यरूशलेमलाई कुल्‍ची-मिल्‍ची गर्नेछन्। “घाम, जून र ताराहरूमा अनौठा चिन्‍हहरू देखिनेछन्। समुद्रका गर्जन र डरलाग्‍दा छालहरूले गर्दा पृथ्‍वीभरि सबै जातिका मानिसहरू डरले हताश हुनेछन्। पृथ्‍वीमा आइलाग्‍ने कुराहरूको डरले मानिसहरू मुर्च्‍छा पर्नेछन् किनभने आकाश-मण्‍डलका सबै शक्तिहरू डग्मगाउनेछन्। त्‍यसपछि मानव पुत्र बादलमा ठूलो शक्ति र महामहिमाको साथ आउँदै गरेको देखा पर्नुहुनेछ। त्‍यस्‍ता कुराहरू हुनेबित्तिकै साहसी भएर माथितिर हेर किनभने तिमीहरूको उद्धार चाँडै हुनेछ।” त्‍यसपछि येशूले तिनीहरूलाई यो दृष्‍टान्‍तको रूपमा यस्‍तो कथा भन्‍नुभयो, “नेभारा र अरू रूखहरूलाई हेर, तिनीहरूमा पालुवा लागेको देखेपछि तिमीहरूले गर्मीको याम लागेछ भनेर जान्‍दछौ। त्‍यसरी नै मैले भनेका यी सबै कुराहरू हुँदैगरेको देख्‍दा परमेश्‍वरको राज्‍य आइसक्‍न लागेछ भनेर तिमीहरूले जान्‍नेछौ। साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, यी सबै कुरा पूरा नहुञ्‍जेल यो जाति नाश हुनेछैन। आकाश र पृथ्‍वी बितेर जानेछन् तर मैले भनेका कुराहरू बित्‍नेछैनन्। “चनाखो भएर बस, धेरै भोज-भतेरपछि नलाग, मातेर नहिँड र यस जीवनको निम्‍ति फिक्री नगर। नत्रता तिमीहरूको मन बोधो हुनेछ र “त्‍यो दिन” तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउनेछ। एक्‍कासि पासोमा परेजस्‍तै “त्‍यो दिन” पृथ्‍वीका सबै मानिसहरूमाथि आइपर्नेछ। त्‍यसैले चनाखो भएर बस। ‘ती सबै डरलाग्‍दा कुराहरूबाट बाँचेर मानव पुत्रको सामुन्‍ने उभिन सक्‍ने शक्ति हामीहरूलाई दिनुहोस्’ भनेर परमेश्‍वरसँग सधैँ प्रार्थना गर।” ती दिनहरूमा येशूले दिउँसो मन्‍दिरमा शिक्षा दिनुहुन्‍थ्‍यो र रातीचाहिँ सहरबाट निस्‍केर जैतुन भन्‍ने डाँडामा बास बस्‍न जानुहुन्‍थ्‍यो। सबै मानिसहरू बिहानै उहाँको शिक्षा सुन्‍न मन्‍दिरमा आउँथे।
 येशू मन्‍दिरबाट निस्‍केर जाँदै हुनुहुन्‍थ्‍यो। त्‍यति बेलै चेलाहरू आएर उहाँलाई मन्‍दिरको सुन्‍दरता देखाए। अनि येशूले भन्‍नुभयो, “तिमीहरूले यी सब देख्‍नेछौ? साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, यी भवनहरूका एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि बाँकी रहनेछैन, सबै भत्‍काइनेछ।” केही समयपछि येशू जैतुन डाँडामा बसिरहनुभएको बेलामा चेलाहरूले सुटुक्‍क आएर उहाँलाई सोधे, “गुरुज्‍यू, हामीलाई भन्‍नुहोस् न, यी सबै कुराहरू कहिले हुनेछन्? अनि तपाईं फर्की आउन लाग्‍नुभएको र संसारको अन्‍त हुन आँटेको छ भनी हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौं?” येशूले जवाफ दिनुभयो, “होशियार रहो! कसैले पनि तिमीहरूलाई छकाउन नपाओस् किनभने धेरै मानिसहरू ‘मुक्ति दिने ख्रीष्‍ट मै हुँ’ भन्‍दै मेरो नाउँमा आउनेछन् अनि धेरै मानिसहरूलाई छकाउनेछन्। तिमीहरूले लडाइँ भयो भन्‍ने र लडाइँ हुने हल्‍लाहरू सुन्‍नेछौ। तर त्‍यस बेला तिमीहरू नडराउनू। ती सबै कुराहरू त हुनु नै पर्छ, तर त्‍यति नै खेर त संसारको अन्‍त हुँदैन। जाति-जातिको बीचमा लडाइँ चल्‍नेछ। अनि एउटा राज्‍यले अर्को राज्‍यमाथि हमला गर्नेछ। जताततै अनिकालपर्नेछ र भूइँचालो जानेछ। यी कुराहरू त दु:खको सुरु मात्रै हो। “त्‍यस बेला मानिसहरूले तिमीहरूलाई पक्रनेछन् र सजाय दिन लैजानेछन्, अझै मार्ने पनि छन्। मेरो कारणले गर्दा सबै जातिका मानिसहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन्। त्‍यस बेला धेरैले आफ्‍नो विश्‍वासलाई त्‍याग्‍नेछन्, एकले अर्कालाई धोखाबाजी गर्नेछन्, घृणा गर्नेछन्। धेरै झूटा अगमवक्ताहरू निस्‍केर धेरै मानिसहरूलाई छकाउनेछन्। जताततै दुष्‍टता बढ्‍ने हुनाले धेरै मानिसहरूको प्रेम पनि सेलाएर जानेछ। तर आखिरसम्‍मै स्‍थिर रहनेहरूचाहिँ बचाइनेछ। सबै जातिका मानिसहरूलाई साक्षी होस् भनेर पहिले परमेश्‍वरको राज्‍यको सुसमाचार संसारभरि सुनाइनेछ। त्‍यसपछि संसारको अन्‍त हुनेछ। “अगमवक्ता दानिएलले ‘मन्‍दिरको पवित्र ठाउँमा घिनलाग्‍दो कुरा राखिएको हुनेछ’ भनेको तिमीहरूले देख्‍नेछौ। (यसको अर्थ पढ्‍नेहरूले बुझून्)। त्‍यस बेला यहूदियामा हुनेहरू पहाडतिर भागून्। घरका छतमा हुनेहरू सामान लिन भित्र जाँदैनजाऊन्। खेत-बारीमा हुनेहरू लाउने लुगासम्‍म पनि लिन फर्केर घरमा नजाऊन्। त्‍यस बेला कोखमा या काखमा बालक हुने आमाहरूलाई त झन् बिजोग हुनेछ। जाडो महिना र विश्रामको दिनमा भाग्‍नुनपरोस् भनेर तिमीहरूले परमेश्‍वरसँग प्रार्थना गर किनभने ती दिनहरूमा आइपर्नेजस्‍तो आपत् र हाहाकार त संसारको सुरुदेखि अहिलेसम्‍म भएकै छैन र पछि पनि हुनेछैन। परमेश्‍वरले ती आपत्‌का दिनहरू नघटाउनुभएको भए कोही पनि बाँच्‍न सक्‍ने थिएनन्। तर आफ्‍ना छानेका मानिसहरूको कारणले गर्दा उहाँले ती दिन घटाइदिनुहुनेछ। “ ‘हेर, मुक्ति दिनुहुने राजा ख्रीष्‍ट त यहाँ हुनुहुन्‍छ वा त्‍यहाँ हुनुहुन्‍छ’ भनेर तिमीहरूलाई कसैले भन्‍दैमा त्‍यो कुरा नपत्‍याओ किनभने यस्‍ता झूटा ख्रीष्‍ट र झूटा अगमवक्ताहरू देखापर्नेछन्। तिनीहरूले ठूला-ठूला चिन्‍ह र अचम्‍मका कामहरू देखाएर सकेसम्‍म परमेश्‍वरले छानेका मानिसहरूलाई पनि झुक्‍याउनेछन्। “हेर, मैले तिमीहरूलाई यो कुरा अघिबाटै भनिदिएको छु है। मानिसहरूले तिमीहरूलाई ‘उहाँ उजाड-स्थानमा हुनुहुन्‍छ’ भने पनि तिमीहरू त्‍यहाँ नजाओ। तिनीहरूले ‘हेर, उहाँ त भित्र कोठामा बस्‍नुभएको छ’ भने पनि तिमीहरू त्‍यो कुरा नपत्‍याओ किनभने आकाशमा पूर्वदेखि पश्‍चिमसम्‍म बिजुली चम्‍किएजस्‍तै म मानव पुत्र आउँदा हुनेछ। जहाँ सिनु छ, त्‍यहीँ नै गिद्धहरू धुरिन्‍छन्! “ती आपत्‌का दिनहरू बितेपछि घाम तुरुन्‍तै अँध्‍यारो हुनेछ, जूनले उज्‍यालो दिनेछैन, ताराहरू आकाशबाट खस्‍नेछन् अनि आकाश-मण्‍डलका सबै शक्तिहरू डग्मगाउनेछन्। त्‍यसपछि आकाशमा मानव पुत्र आउने चिन्‍ह देखापर्नेछ। मानव पुत्रलाई ठूलो शक्ति र महामहिमाको साथ आकाशको बादलमा आइरहेको देखेर संसारका सबै जातिहरू रुने-कराउने गर्नेछन्। तुरही फुकिनेछ अनि मानव पुत्रले स्‍वर्गदूतहरूलाई पृथ्‍वी र आकाशका चारै कुनामा पठाउनेछन् र परमेश्‍वरले चुनेकाहरूलाई जम्‍मा गरेर ल्‍याउनेछन्। “नेभाराको रूखबाट केही कुरा सिक। यसका हाँगाहरू टुसाएर पालुवा हालेपछि गर्मी चढेछ भनेर थाहा हुन्‍छ। त्‍यसरी नै मैले भनेका यी सबै कुराहरू हुँदैगरेको देख्‍दा मेरो आउने बेला आइपुग्‍नै आँटेको छ भनी तिमीहरूले जान्‍नेछौ। साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, यी सबै कुरा पूरा नहुञ्‍जेल यो पुस्‍ता बित्‍नेछैन। आकाश र पृथ्‍वी नै बितेर जानेछन्, तर मैले भनेका कुराचाहिँ बित्‍नेछैनन्।